आफ्नै फराकिलो घर छाडेर डेरामा नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय किन ? – SunkoshiNews
आफ्नै फराकिलो घर छाडेर डेरामा नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय किन ?
सरला कार्की, सुनकोशी न्युज, २०७६ श्रावण २२, २१ः५१
२०७२ सालमा गएको भूइचालोमा परी बल्खुस्थित तत्कालिन एमालेको केन्द्रीय कार्यालय भवन पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भयोे । त्यसलगत्तै धुम्बराहीमा रहेको पासाङ ल्हामु स्मृति प्रतिस्ठानको भवन भाडा तिर्नेगरी एमालेले कन्द्रीय कार्यालय त्यसमा सा¥यो । त्यसबेला एमाले नेता कृपासुर शेर्पाले त्यो भवन एमालेको केन्द्रीय कार्यालय राख्नको लागि उपलब्ध गराएका थिए ।
आजको कान्तिपुर दैनिक पत्रिकाले नेकपाको धुम्बराहीस्थित केन्द्रीय कार्यालय सरकारी जग्गामा रहेको समाचार प्राथमिकताका साथ छापेको छ । त्यसैगरी विभिन्न अनलाइन मिडियाले पनि हिजैदेखि सोही व्यहोराको समाचार लगातार प्रकाशित गरिरहेका छन् । नेकपाको मात्र नभएर बबरमहलस्थित मधेसवादी दल राजपाको केन्द्रीय कार्यालय पनि सरकारले मधेसी निजामति कर्मचारी युनियनलाई उपलब्ध गराएको जग्गामा बनको भवनमा रहेको समाचार छापिएको छ । धुम्बराहीको घर पासाङ ल्हामु स्मृति प्रतिस्ठानलाई सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा बनाइएको प्रतिष्ठानकै भएको बताइएको छ । यसरी दलको कार्यालय राख्न दिनु हुन्थ्यो कि हुदैनथ्यो भनेर पनि अहिले बहस हुन थालेको छ ।
एमाले–माओवादी पार्टी एकतामा आइसकेपछि बनेको नेकपाको दुईवटा केन्द्रीय कार्यालयमध्य माओवादीको केन्द्रीय कार्यालय रहेको कोटेश्वर पेरिसडाँडाको घरजग्गा नेकपाकै सम्पत्ति हो । त्यसमा नेकपाको केन्द्रीय कार्यालयका लागि आवश्यक कोठा, हल, क्यान्टिन र पार्किङको राम्रो सुविधा छ । दुईवटा भवनमध्य एउटामा पार्टी र अर्कोमा मजदुर कार्यालय रहेको थियो । एउटा फ्ल्याटमा लाइब्रेरी समेत रहेको छ । तर नेकपाले केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा नराखेर धुम्बराहीकै साँघुरो भाडाको घरमा राख्ने निर्णय ग¥यो ।
हुन त पार्टी एकताताका पार्टीको मूल केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा रहने भन्ने निर्णय भै साइनबोर्ड पनि टासिँयो । दुईजना अध्यक्ष, महासचिव लगायतका लागि च्याम्बर पनि मिलाउने काम भयो । तर पछि कसलाई के चित्त बुझेन, पेरिसडाँडालाई जनवर्गिय संगठनहरुको कार्यालय बनाउने भन्दै पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय फेरि धुम्बराहीतिरै भाडाको घरमा सार्ने काम भयो । यो स्थानान्तरणको तानातान फेरिसडाँडाभन्दा धुम्बराहीको भवन ठूलो भएर भने पक्कै होइन ।
आज नेकपाका स्थायी समिति सदस्य, प्रदेश नम्बर ५ का इन्चार्ज तथा मुख्यमन्त्री शंकर कोइरालाले पेरिसडाँडामा रहेको भवन तथा जग्गा साँघुरो भएका कारण धुम्बराहीमा केन्द्रीय कार्यालय सार्नुपरेको बताउदै आफ्नो फेसबुक वालमा स्टाटस् पोष्ट गरेका छन् ।
एकातिर एकवर्ष पूरा भैसक्दा पनि पार्टी एकताको कामले पूर्णता नपाउनु, विचारको विषय महाधिवेशनमा वहस गर्ने अहिले जनताको जनवाद भनेर जाने सहमतिबिपरित सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल, बामदेव गौतम नै जबज नभए त भुतुक्कै भइन्छ भन्दै लेख लेख्ने, भाषण गर्दै हिड्नु, दुई अध्यक्षले पालैपालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने भन्ने सहमतिबिपरित आजसम्म केपि ओलीले मात्रै हरेका बैठकको अध्यक्षता गरिरहने आशक्ति देखाउनु, जनयुद्धका उलब्धीमा दाई गर्ने तर जनयुद्धको नामै सुन्न नचाहनु, हरेक सहमति र सम्झौतालाई बेवास्ता गर्नु, संघीयताप्रति जनताको बितृष्णा जाग्नेगरी सरकारका काम केन्द्रित हुनु जस्ता यावत घटनाले धुम्बराहीमै कार्यालय राख्नुपर्छ, पेरिसडाँडामा राख्नै हुदैन, बरु बल्खुमै ट्रस छाप्रो बनाएर राख्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनु जस्ता गतिविधिले एउटा पक्ष पार्टी एकताप्रति साँच्चिकै इमानदार छैन कि भन्ने आशंका पैदा भएको कार्यकर्ता पंक्तिमा चर्चा हुन थालेको छ । यसबारे नेकपाका केन्द्रीय सदस्य युवराज चौलागाईले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडालाई प्रयोग गर्नुपर्ने बताउदै आफ्नो फेसबुक वालमा स्टाटस् पोष्ट गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २२, २०७६
भारतीयलाई नागरिकता: कर्मचारीमाथि गृहको अनुसन्धान
प्रतिनिधिसभा सांसद पम्फा भुषालको निजी निवासमा काम गरेका पूर्व जनमुक्ति सेना जीवनको भीक माग्दै अस्पतालमा